समाचार - WPC बारे केही सुझावहरू
काठ प्लास्टिक कम्पोजिट (डब्ल्यूपीसी) उत्पादनहरूले दुबै काठ र पोलीमर सामग्रीका फाइदाहरूको मजा लिन्छन्, तर यो उनीहरूको कमीबाट मुक्त हुन्छ। डब्ल्यूपीसी सामग्री उच्च शक्ति हो, सड्नबाट बचाउँछ, मौसम प्रतिरोध, स्लिप प्रतिरोध। यो परिदृश्य, बागवानी, विलामा प्रयोग गर्न सकिन्छ। र अन्य आउटडोर प्लेटफर्म। यति धेरै राम्रा क्षमताहरूको साथ, अधिक र अधिक व्यक्तिले WPC सामग्री प्रयोग गर्दछ आफ्नो क्षेत्रको सजावट गर्न। तर के तपाईंलाई WPC उत्पादनको केहि सुझावहरू थाहा छ?
१. केही ग्राहकहरू अर्डर गरेपछि उनीहरूको डब्ल्यूपीसी डेक प्राप्त गर्न अत्यन्तै चाहन्थे। मेरो प्यारो साथी यत्तिको अधीर नहुनुहोस्, डब्ल्यूपीसी कारखानालाई तपाईंको कम्पोजिट डब्ल्यूपीसी डेकिंग उत्पादन गर्न समय चाहिन्छ। त्यसैले तपाईंको डब्ल्यूपीसी बोर्ड उत्पादन गर्न कारखानालाई धक्का नदिनुहोस्। द्रुत, यदि कच्चा माल धेरै छिटो extruded छ, को यांत्रिक गुणहरू WPC फर्श जब यो गठन हुन्छ बिग्रन्छ। तर यसको मतलब यो होइन, ढिलो र राम्रो गुणस्तर।
२. हामीलाई थाहा छ, हाम्रा डब्ल्यूपीसी उत्पादनहरू पूर्ण रीसायकल योग्य र वातावरणीय छन्। हुनसक्छ केही ग्राहकले हाम्रो गुणवत्ताको गुणस्तरको बारेमा चिन्ता गर्नेछन्। हामी तपाईंलाई प्रतिबद्ध गर्दछौं कि हामी कहिले पनि रिसाइकल योग्य सामग्री प्रयोग गर्दैनौं। हाम्रो अर्डरको रूपमा, हामी नयाँ सामग्री प्रयोग गर्नेछौं। र हामी सामग्रीलाई जब हामी सामान खरीद गर्छौं परीक्षण गर्नेछौं। यस्तै, हामी हाम्रो मिश्रित डब्ल्यूपीसी डेकिंगको राम्रो गुणस्तर सुनिश्चित गर्न सक्दछौं।
W. डब्ल्यूपीसी उत्पादनहरूको सब भन्दा सामान्य समस्या लुप्त हुँदै गएको छ। विशेष मौसममा, जस्तै सूर्यको किरणले सबै उत्पादनहरू उनीहरूको र lose गुमाउन सजिलो हुन्छ। यदि तपाईंको देशको पनि यस्तै अवस्था छ भने तपाईंले हाम्रो कारखानालाई भन्नु पर्ने हुन्छ। हामी थप्न सक्छौं अधिक यूवी प्रतिरोधात्मक थप, यसले डब्ल्यूपीसी बोर्डहरूलाई अधिक फिडि resistance रेसिस्टन्स बनाउनेछ। जेसुकै परिस्थिति भए पनि हाम्रो उत्पादनहरूले कम्तिमा color-१० बर्षे रंग राख्न सक्दछ। यो धेरै राम्रो क्षमता हो।
त्यसोभए तपाइँको खाना खाने बारे कसरी तपाइँको समग्र डब्ल्युपीसी मेरो बारे वर्णन गरीरहेको छ? यदि तपाइँ तपाइँको काठको प्लास्टिक कम्पोजिट डेक गर्न पर्ख्न सक्नुहुन्न भने, हतार गर्नुहोस् र हामीसँग सम्पर्क गर्नुहोस्!
पोष्ट समय: Jul-06-2021
डब्ल्यूपीसी कम्पोजिट डेकिंग, WPC आउटडोर डेकिंग, WPC सजावट भुइँ, आउटडोर डब्ल्यूपीसी डेकिंग, काठ प्लास्टिक कम्पोजिट डेकिंग, WPC फर्श,